Umhla My Pet » Ngaba elisekunene kuwa Ndayithanda indoda etshatileyo?
ukubuyekezwa: Sep. 17 2020 | 3 min ukufunda
Kukho amakhosikazi amaninzi kuwa eluthandweni namadoda atshatileyo ngokulahleka, ngoxa abanye abaninzi ngabom bafune amadoda atshatileyo ukuze abulale (pun yenzelwe) ngokuba kwindoda senziwe ngendlela un-ekhoyo. nokuba, umbuzo isoloko ukuba ingaba ilungelo kuwa eluthandweni nendoda etshatileyo?
Ukuwa indoda etshatileyo inokubonakala kunene, ingakumbi xa umntu uthi bavakalelwa efanayo kwakunye. Ukwengeza, umfazi kwimeko enjalo kwakhona ufumana ngokuzicingela kukhuseleko ukuba kungekudala umntu oya kusahlula umfazi, ukwenzela ukuba ulwalamano lwabo kutyatyamba olungaphazanyiswayo. Noko, a mampunge, ekufuneka yaphulwe ngokupheleleyo ngenxa yezi zizathu zilandelayo.
Abasetyhini kufuneka bafunde ukuba bazihloniphe
Indoda kunye nosapho akasayi kukwazi ukunikezela umfazi ulwaneliseko ukuba nolwalamano ngokwenene. Nokuba umntu uthatha ixesha lakhe kumnyamekela ngononophelo, uthando, kunye nezipho, inyaniso, ayiyi nditshintshe nto!
Loo mfazi umele uzame ababakhe ibingabo umfazi wale ndoda. Babeza kuvakalelwa njani omnye umfazi ukuba wenza okufanayo kubo? Ukuba ngenene bazihloniphe, kufuneka baqonde ukuba into ekuphela baya kuphela ebenzela na ayichithe usapho baya, kwaye oko akuyi ilayibhuli nawuphi na umfazi ufuna ukuba, Ndiyathemba!
Abantu baya kuze ashiye nabafazi bawo
Nokuba abantu bacula ngokuphindaphindiweyo ukuba oya kusahlula abafazi babo ngokukhawuleza ukwenzela ukuba babe nolwalamano wokwenene uthando lwakhe abatsha bafumana, Akuzange kwenzeka. Ukuba madoda nabafazi uyavuma ukuba nolwalamano nabo, esazi ukuba iintsapho, ngoko amadoda bangene kummandla intuthuzelo. Kule meko, ngokuqinisekileyo baya kufuna ukuba bagcine imeko-quo, kuba abayi abanqwenela ukushiya iintsapho zabo.
Cinga osapho le ndoda
Women, musani lokuzingca! Phambi kokuba sibe nolwalamano ukuba indoda etshatileyo, khumbula usapho ukuba uza wawonakele. Imeko aza kubabetha kanobom ukuba kukho a bantwana. ngokuqinisekileyo oonyana baya kuba zichaphazeleke kakhulu ukuba umntu agqibe kwelokuba emke kubo. Kwaye makhe ukulibala umfazi, ngubani ukuze boyikiswa ubomi.
Ukuba akukho nto yimbi, ngoko ke iyunithi usapho kufuneka sisiqinisekise umfazi ukuba akulunganga ukuba kuwa eluthandweni nendoda etshatileyo.
Abasetyhini kufuneka ungaze waneliswe ngaphantsi esibafaneleyo
Kutheni emhlabeni, ngaba entle, okrelekrele kwaye smart nomfazi ufuna ukulihlawula umntu ongakwaziyo angafakwa kulwalamano lokwenene, kuba nje umntu atshate? Ngaba umfazi enjalo kuba bhetele khangela indoda enye oya kunikezelwa ngokupheleleyo ukuba nolwalamano ngokwenene? Abasetyhini kufuneka uhlobo kwaye ukholwe bona kunye namandla azo ukutsala indoda enye, naye basenokwabelana ulwalamano akukho mitya iqhotyoshelweyo.
Ke kulungile ukuba uzive ubuhlungu uwaphule uthando yentaka
Uthando yenye iimvakalelo kunzima ukulawula. Njengokuba umfazi ukuze ngokwenene nangokunzulu umthande indoda etshatileyo, inyaniso kukuba budlelwane hayi esiya naphi. Ngesi sizathu, kungcono ukuzibulala kamsinyane, kunokuba kamva, ukwenzela ukufumana ixesha elaneleyo ukuphilisa. Qiniseka ukuba akuyi kuba lula maxa onke, kodwa iya kuba kuyo ekupheleni.
Musa ukuphazanyiswa izimvo zabanye
Inenekazi nolwalamano indoda etshatileyo baya kugwetywa ngabanye kuzo zonke iimbombo. Ibhinqa, ngoko ke, kufuneka womelele uzaphule nale ndoda kuba yinto elungileyo ukwenza. Ukwengeza, ngayo inzuzo yomfazi ukuba makayiqhawule, ukuba bakwazi ukuhlangabezana indoda ngubani ngabazimisele ngokupheleleyo ukuba nolwalamano.
Musa qhagamshelana indoda ngenxa yaso nasiphi na isizathu
Xa umfazi wahlukana nendoda etshatileyo, ke kunyanzelekile ukuba ukuphelisa zonke iintlobo zoqhagamshelwano nale ndoda. Umfazi naxa utshintsh inani zoqhagamshelwano into ezisetyenziswayo ukuze banxibelelana ndoda. Oku kuya kuba sisiqalo senkqubo yokuphilisa.
Akukho bani unokulawula ngubani yena okanye yena kuwa uthando kunye, nokuba, kubalulekile ukukhumbula ukuba akulunganga ukuba kuwa eluthandweni nendoda etshatileyo. Ngaloo nqaku, abo bafazi sele eluthandweni namadoda atshatileyo, ixesha layo libe phezulu lekhefu!